Xukuumadda Soomaaliya oo canbaareysay dilka Wariyihii Idaacadda Shabelle ee Gobolka Hiraan,kuna eedaysay inay fuliyeen Al-Shabaab WAR-Saxaafadeed – Radio Daljir
Xukuumadda Soomaaliya oo canbaareysay dilka Wariyihii Idaacadda Shabelle ee Gobolka Hiraan,kuna eedaysay inay fuliyeen Al-Shabaab WAR-Saxaafadeed
Abriil 6, 2012 12:00 b 0
Mogadishu, Apr 06 -Xukumadda Soomaaliya ayaa si xoogan u dhaleecaysay dilkii qorsheysnaa ee lagula kacay Mahad Salaad Aadam, wariyihii Shabelle ee Gobolka Hiiraan shalay galab, isaga oo ay dileen 3 nin oo wejiga soo xirtay, kuwasoo ku dilay gurigiisa hortiisa, oo ku yaalay magaalada B/weyne.
Wasiirka Warfaafinta Boostada & Isgaarsiinta, Mudane C/qaadir Xuseen Maxamed (Jaahweyn) oo Wakaaladda Wararka Qaranka Soomaaliyeed la hadlayay maanta ayaa yiri ?Waanu canbaarayn, dilkan qorsheysan ee wuxuushnimada ah oo loo geystay Wariye ka tirsan mid ka mida Hay?adaha Warbaahineed ee hormuudka ka ah u shaqeynta dalka?
Wasiirka oo hadalkiisa sii watay ayaa yiri ? Adam waa wariyihii ugu danbeeyay ee Al-shabab dilaan, waxaa ayna caadeysteen intii ay ku bilaabeen argagixinta Bulshada Soomaaliyeed iney beegsadaan, Wariyaasha, Milkiilayaasha idaacadaha, agaasimayaasha iyo tifatirayaasha?
Wasiirka ayaa hadalkiisa ku soo gababgeeyay ?Anigoo ka wakiil ah xukuumadda Soomaaliya, waxaan tacsi u dirayaa si gaara qoyska iyo saaxiibada marxuumka, dhamaan Wariyayaasha iyo guud ahaan shacabka Soomaaliyeed, waxan eebbe uga baryayaa in uu u naxariistii jano ka warabiyo?
Nin qorsheeynayay dilka abaanduuliyaha ciidamada xooga dalka oo lasoo bandhigay.
Golaha Wasiirada ee dowladda KMG Soomaaliya oo kulan ka yeeshay qaraxii Golaha Murtida shalay kadhacay, heshiisyadii Gaalkacyo,dowladda Germany iyo Dowladda KMG